दाङमा राप्ती उप क्षेत्रीय अस्पताल र राप्ती बिज्ञान प्रतिष्ठानको बिबाद समाधान गर्न माग » खबरहरुको एउटै केन्द्र
दाङमा राप्ती उप क्षेत्रीय अस्पताल र राप्ती बिज्ञान प्रतिष्ठानको बिबाद समाधान गर्न माग
सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ११:५३ मा प्रकाशित !
घोराही, १० वैशाख । घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालबीचको विवाद तत्काल समाधान गरेर अगाडी बढ्न कांग्रेस दाङ क्षेत्र नम्बर २ र ३ ले माग गरेका छन् । कांग्रेस दाङ क्षेत्र नम्बर २ र ३ को आज आईतवार घोराहीमा छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकले अस्पताल र प्रतिष्ठान बिचको विवादलाई तत्काल समाधान गरि अगाडी बढ्न माग गरेका हुन् । राजनितिक स्वार्थकालागि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सत्तारुढ दल र दलका व्यक्तीहरुले अन्योलमा पार्ने प्रयास गरेको भन्दै कांग्रेस क्षेत्रीय समितिहरुले बैठकबाट निर्णय समेत गरेका छन् । साथै उनीहरुले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा राजनिती नगर्न सत्तारुढ दलहरुलाई अनुरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस साविक क्षेत्र नम्बर ३ को बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधीसभा सदस्य अनिता देवकोटाले दंगाली एवं राप्तीबासीमाथी घात गर्ने अधिकार कुनै दल र व्यक्तीलाई नभएको बताउनुभयो । यस विषयमा अनेक चलखेल नगर्न एमाले र माओवादी पार्टिलाई चेतावनी दिनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्र सबैको आवश्यक र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले जनताको अधिकारमाथी खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सहज रुपमा सञ्चालन गरेर दाङलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच नम्बर प्रदेशको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने देवकोटाको भनाई छ । उहाँले यस विषयमा आफूले संसदमा जोडदारका साथ कुरा राखेको भन्दै चाडै यसले निकास पाउने विश्वाव व्यक्त गर्नुभयो ।
क्षेत्रीय सभापति भुपबहादुर डाँगीको अध्यक्षता एवं प्रतिनीधी सभा सदस्य अनिता देवेकोटाको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको बैठकले क्षेत्रीय समिति विस्तार गरेको छ । कांग्रेस विधान अनुसार क्षेत्र नम्बर ३ को सदस्यहरुमा घना डिसी, भिमा शाह, लीला नेपाली, पूर्णबहादुर राना, केशव केसी रहनुभएको छ । यस्तै वैठकले जेठको दोस्रो हप्तादेखी आफ्नो क्षेत्रका हरेक वडामासंगठन सुदृढिकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनीधी अब्दुल सलाम सारुफी (कल्लु)को निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । बैठकको सहजिकरण क्षेत्रीय सचिव बद्रिकुमार खड्काले गर्नुभएको थियो ।
यस्तै कांग्रेस दाङ साविक क्षेत्र नम्बर २ को वैठकपनि आईतवार घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । क्षेत्रीय सभापति गिरिराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पनि सांगठनिक गतिविधीहरुलाई तीव्र बनाएर गाँउगाँउ सम्म पुग्ने निर्णय गरेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: संघीयता कार्यान्वयनका लागि समृद्धि आवश्यक : अध्यक्ष यादव
NEXT POST Next post: सम्भोग पछि महिलाहरुको पिडा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ११:५३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ११:५३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ११:५३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ११:५३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख १०, २०७५ ११:५३